Fahasamihafana eo amin'ny asidra lactate sy laktat | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny asidra lactate sy laktat | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / fahasamihafana eo amin'ny asidra lactate sy lactate
Fahasamihafana eo amin'ny asidra lactate sy laktat
22 Mey 2012 Narotsak'i Dunee
Lactate vs asidan'ny lakika
Ny asidra lakika sy ny lakta dia asidra mifangaro sy mifototra. Raha simika, ny maha samy hafa azy dia ny fananana sy ny tsy fananana hidrôzenina. Asidra malemy dia asidra malemy, saingy mahery noho ny asidra acetic.
Ny asidra lakika dia asidra karboksilika. Ny asidra lakika dia natokana voalohany ary fantatry ny mpahay simia soedoà, Carl Wilhelm Scheele tamin'ny 1780. Izy io dia fantatra ihany koa amin'ny asidra ronono satria novokarina tamin'ny ronono.
Ny asidra lakika dia manana ny endriny simika an'ny C 3 H 6 O 3 . Izy io dia manana ny firafitra manaraka. Misy vondrona hydroxyl mifatotra amin'ny atôma karbonika manaraka aorian'ny vondrona carboxyl. Noho izany, asidra laktika dia asidra alpha hydroxyl. Ny atôma karbonika izay ampiarahina amin'ny vondrona hidroksil dia chiral. Noho izany, ny asidra laktika dia manana isomera optika roa. Izy ireo dia L - (+) - asidra laktika na ( S ) -lactic acid, ary ny iray hafa dia ny fitaratry ny sary D - (-) - asidra lakika na ( R )-acid laktat.
Noho ny fisian'ny vondrona hydroxyl sy ny vondrona carboxylic ao anatin'io molekiola io ihany sy ny akaiky azy ireo, ny fifamatorana hidrôzenina intra-molekiola dia hita amin'ny asidra laktika. Izany dia mahatonga ny asidra laktika ho mpanome proton tsara (toy ny asidra acetic). Raha lazaina amin'ny teny hafa, noho ny fifamatorana hidrôzenina intra-molekiola, ny vondrona carboxylic dia tsy afaka nahasarika ny protonany mafy; ka mirona hanala mora foana.
Ny habetsahan'ny molar asidra laktika dia 90.08 g mol −1 . Koa satria molekiola bitika kely misy vondrona polar izy io, dia tsy azon'ny rano izy io ary hydroscopic. Tsy mety amin'ny etanol koa io. Ny asidra lakika dia vokarin'ny toetrandro anaerobika amin'ny biby. Ity dingana ity dia fantatra amin'ny anarana hoe fermentation. Izy io dia novokarina avy amin'ny pyruate amin'ny alàlan'ny enzim lactate dehydrogenase. Matetika, ny fermentation dia tsy atao ao anaty sela, fa mandritra ny fampihetseham-batana dia azo hamokarana betsaka ny asidra laktika. Ny asidra lakaktika dia azo vokarina amin'ny bakteria asidra lakaktika koa. Toy izany no hamokarana azy amin'ny indostrialy. Ny asidra lakika dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanafody ho an'ny sakafo sy ho an'ny detergents.
Ny lakate dia ilay anion vokarina avy amin'ny asidra laktika. Rehefa levona anaty rano ny asidra laktika dia mirona hisaraka izy io ary mamokatra ion misy lakoty sy proton. Io dia ion-voampanga -1. Ny pka an'ny asidra laktika dia 3.86. Amin'ny toe-piainana ara-batana, ny PH dia avo kokoa noho ny pKa an'ny asidra laktika. Noho izany ny ankamaroan'ny asidra laktika ao amin'ny vatana dia misaraka ary misy amin'ny endrika lactate. Noho izany, ny lactate no fototry ny asidra lakaktika. Ny lactate dia manana ny formula CH 3 CH (OH) COO - .
Ny lakate dia zava-dehibe amin'ny metabolisma ao amin'ny ati-doha. Mandritra ny fampihetseham-batana dia mamokatra hozatra ny lactate.
Asidra lakika vs laktate
Ny lakate dia novokarina avy amin'ny famoahana asidra lakaktika.
Ny asidra lakika dia manana fahaizana manome proton ary tsy afaka mamono lakrata.
Amin'ny vahaolana (tsiranoka sela) dia manjaka ny endrika lactate.
Lactate dia anion; noho izany dia manana fiampangana -1. Ny asidra lakika dia tsy misy haba.
Ny lakate dia ny fototran'ny asidra lakaktika.
Ny asidra lakika dia manana fatoran'ny hidrôzenina intra-molekiola fa ny lactate kosa tsy manana.
Ny asidra lakaktika dia afaka mamakivaky ireo voan'ny lipida fa ny lactate kosa tsy afaka.
Fahasamihafana eo amin'ny fitambarana voajanahary sy ny tsy fitambarana Fahasamihafana eo amin'ny teboka tselatra sy ny teboka afo Fahasamihafana eo amin'ny diffusion sy ny effusion Fahasamihafana eo amin'ny iodometry sy ny iodimetry Fahasamihafana eo amin'ny baking soda sy nyoda fanasana
Filed Under: Chemistry Tagged With: lactate , Lactic Acid , asidra ronono
Momba ny mpanoratra: Dunee
Fahasamihafana eo amin'ny fizahantany sy fizahan-tany maharitra
Fahasamihafana eo amin'ny Frequement fondamente sy ny Frequelle naturel
Fahasamihafana eo amin'ny HTC Inspire 4G sy Samsung Galaxy S 4G
Fahasamihafana eo amin'i Johnnie Walker Black Label sy Blue Label
Fahasamihafana eo amin'ny Diode sy ny Zener Diode